Arimaha Dibadda Shiinaha Oo Markii Ugu Horeysay Faallo Ka Bixisay Gantaalkii Fakaday | Xaqiiqonews
Arimaha Dibadda Shiinaha Oo Markii Ugu Horeysay Faallo Ka Bixisay Gantaalkii Fakaday
Wasaaradda arimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta oo jimco ah faallo ka bixisay “gantaalkii fakaday” kaasi oo xakameynta ka baxay.
Afhayeenka wasaaradda arimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin oo ka hadlaayey gantaalkii baxsaday ee la filnaayo in uu ku soo dhaco dhulka ayaa sheegay in gantaalka uu guban doono marba hadii uu soo galo daboolka dhulka.
Afhayeenka waxa uu intaasi ku daray in ay adagtahay in uu wax dhib ah geysto gantaalka-sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters,isaga oo yiri “in uu dhibka geytso aad ayey u yartahay”.
Xilli sii horeysay oo isla jimcada ah ciidanka cirka Mareykanka ayaa ku baahiyey webseetka “Space trek”, waxyaabaha au filanayaan ee ku aadan gantaalka iyaga oo tilmaamay in gantaalka uu soo gali doono daboolka dhulka 9-ka May, meel ku aadan waddanka Turkmenistan.
Sidoo kale Aqri: Maxaadan Ogeyn Oo Shiinaha Dunida Ku Soo Kordhiyey Dhawaan
Sida ay sheegayaan ciidanka Mareykanka gantaalka ayaa daboolka dhulka soo gaari doono 9 May, 2:3 saq dhexe xilliga maxaliga ah ee Muqdisho, waxaana la filayaa in uu ka soo galo dhulka meel ku aadan Turkmenistan
Ciidanka Mareykanka waxa ay horay u sheegeen in gantaalka uu ku aadan yahay meel ku aadan Badweynte beesifikada oo ku dhaw NewZealand.
Waxa ay u badan tahay in gantaalka uu burburo hadii uu soo galo daboolka dhulka, waxaana la filayaa oo kaliya in dhulka ay soo gaaraan “burburka gantaalka”, laakiin hadii ay dhacdo in uu soo dhaco gantaalka oo isheysta waxaa la saadaalinayaa in uu ku soo dhici doono badaha.